Semalt बाट १ W तर अनलाइन बिक्री बढाउन
Semalt बाट १ays तरीका तपाईंको अनलाइन बिक्री बढाउन
साना र ठूला दुबै व्यवसायको मुख्य लक्ष्य भनेको अनलाइन बिक्री बढाउनु हो। पहिले केवल अफलाइन बेचिएको ब्यापार मालिकहरूले अब ग्राहकहरूलाई साइबरस्पेसमा विभिन्न तरिकाहरूतर्फ आकर्षित गर्न कोशिस गर्न थालेका छन्।
राम्रो समाचार यो हो कि अनलाइन बिक्री बढाउनु गाह्रो वा महँगो छैन जस्तो तपाईंलाई लाग्न सक्छ। तपाईं न्यूनतम पूंजीको साथ पनि अनलाइन बिक्री बढाउन सक्नुहुनेछ।
त्यसो भए, यस लेखमा तपाईले अनुसरण गर्ने चरणहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ र t उसले समाधान गर्दछ कि Semalt तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछ प्रत्येक चरणमा सफल हुन।
अनलाइन बिक्री बढाउन १ Quick द्रुत तरिकाहरू
तलका सुझावहरू सबै प्रकारका व्यवसायहरूमा लागू गर्न सकिन्छ, साना पसलबाट ठूला कम्पनीहरूमा। इन्टरनेट को लागी सबै आकार को व्यवसाय को लागी उस्तै गर्न अनुमति दिन्छ अनलाइन बिक्री वृद्धि गर्ने अवसर। यहाँ तपाईंको व्यवसायको अनलाईन बिक्री द्रुत रूपमा बढाउनको लागि १ ways तर तरीकाहरू छन्:
१. सहि डोमेन नाम छनौट गर्नुहोस्
साइबरस्पेसमा तपाईंको पहिचान धेरै महत्त्वपूर्ण छ। सही डोमेनको साथ, तपाईं ईन्टरनेटमा एक विश्वसनीय व्यवसाय पहिचान बनाउन सक्नुहुन्छ। यस बाहेक, डोमेनले उपभोक्ताहरूको लागि तपाईंको व्यवसाय चिन्न सजिलो बनाउँदछ।
डोमेनहरू सँधै ".COM" हुनु हुँदैन। त्यहाँ डोमेन विस्तारहरूको धेरै विकल्पहरू छन् जुन तपाईं व्यवसायको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरण को लागी, तपाईं एक अनलाइन स्टोर वेबसाइट निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ। तपाईं ".STORE" डोमेन विस्तार प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
".STORE" बाहेक, त्यहाँ अझै अन्य डोमेन विस्तारहरू छन् जुन ".COM" जत्तिकै राम्रो छ तिनीहरू मध्ये केही: ".SPACE", ".ONLINE", ".SITE", र ".WEBSITE" छन्।
त्यहाँ त्यहाँ धेरै डोमेन विस्तार विकल्पहरू छन् तपाईंको व्यवसायको लागि सहि डोमेन नाम सिर्जना गर्न। यदि तपाईं अझै भ्रमित हुनुहुन्छ भने चिन्ता नगर्नुहोस्। Semalt विशेषज्ञहरूको समर्थन सोध्नुहोस् तपाईलाई यस विषयमा नि: शुल्क सल्लाह दिन।
तपाइँ Semalt मा विशेषज्ञहरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्छ प्रतिस्पर्धा नाघ्ने डिजाइनको साथ तपाईंको वेबसाइट सिर्जना गर्नुहोस्।
२. वेबसाइटका लागि सहि प्लेटफर्म छनौट गर्नुहोस्
वेबसाइट सिर्जना गर्नु मुख्य आधार हो जसले गर्दा तपाईंको अनलाइन बिक्री अधिक सफल र बढ्दो हुनेछ। यदि वास्तविक संसारमा तपाईंसँग भौतिक शप छ भने, भर्चुअल वर्ल्डमा तपाईंको वेबसाइट तपाईंको पसल हो। तपाइँ केवल तपाइँको वेबसाइट को लागी एक मंच को छनोट गर्न सक्नुहुन्न। एक अनुचित प्लेटफर्मले मात्र तपाईलाई चोट पार्छ र निश्चित रूपमा तपाईका ग्राहकहरू।
हाम्रो सिफारिश वेबसाइट निर्माण प्लेटफर्म WordPress हो। वर्डप्रेस विश्वव्यापी percent० प्रतिशत वेबसाइटको निर्माणको पछाडिको मंच हो। यसले अन्य वेबसाइट निर्माण प्लेटफर्महरूको बीच सबै भन्दा लोकप्रिय बनाउँदछ।
यस बाहेक, तपाईंले आफ्नो वेबसाइटको लागि उत्तम 'घर' छनौट गर्न आवश्यक छ। तपाइँले WordPress प्रयोग गरेर सिर्जना गर्नुभएको वेबसाइटलाई होस्टिंग आवश्यक पर्दछ। होस्टिंग सबै फाईलहरू भण्डार गर्नको लागि ठाउँ हो, छविहरू देखि HTML सम्म सामग्री सम्म।
जे होस् यसको फाईल फाइलहरू भण्डारण गर्न "मात्र" हो, तपाइँ होस्टिंग सेवा छनौट गर्न मनमानी हुनुहुन्न। किनभने नक्कली होस्टिंगले तपाइँको वेबसाइटलाई पहुँच गर्न ढिलो बनाउँदछ वा अपरिमित पनि छ। एक विक्रेताको रूपमा, यस प्रकारको चीज धेरै हानिकारक छ, हैन?
तसर्थ, तपाईंले उत्तम होस्टिंग छनौट गर्न आवश्यक छ। एक होस्टिंग जसले तपाईंको व्यापार वेबसाइट अनलाइन २ keeps घण्टा राख्दछ, चाँडै पहुँच गरिन्छ, र सुरक्षित पनि छ।
A. एक व्यावसायिक थिम प्रयोग गर्नुहोस्
WordPress बनाएर एक वेबसाइट सिर्जना गरे पछि र उत्तम होस्टिंग सेवा भाँडामा लिएपछि, तपाईंले गर्नुपर्ने भनेको एक पेशेवर थिम छनौट गर्नुपर्दछ। वर्डप्रेस नि: शुल्क धेरै व्यावसायिक विषयवस्तुहरू प्रदान गर्दछ। त्यसोभए तपाईले लागतहरूको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन।
Organ. जैविक ट्राफिकबाट सदस्यता लिनुहोस्
गुगलमा खोज परिणामहरू अधिकांश वेबसाइटहरूका लागि ट्राफिकको मुख्य स्रोत हुन्। तपाईंको वेबसाईट गुगल खोज परिणामहरूमा सजिलैसँग एसईओ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर फेला पार्न सकिन्छ। SEO वा खोज इञ्जिन अप्टिमाइजेसन तपाईंको वेबसाइट खोज इञ्जिन मैत्री बनाउन दिशानिर्देश र प्रविधिहरूको संग्रह हो।
यो पनि बुझ्नुपर्दछ कि एसईओ परिणामहरू प्राप्त गर्न यसले धेरै समय र व्यावसायिकता लिन्छ। यसैले SEO प्रविधिको प्रयोगमा धैर्य र सावधानी अपनाउनु आवश्यक छ। जे होस्, Semalt ले तपाईंलाई गुगलको शीर्षमा पुग्न सजिलो र द्रुत तरीकाको साथ प्रदान गर्दछ प्याक AutoSEO।
यो एसईओ प्याक एक अनलाइन व्यापारको लागि वास्तविक "पूर्ण घर" हो:
तपाईंको वेबसाइटको दृश्यता सुधार गर्नुहोस्
प्रत्येक पृष्ठको अनुकूलन
प्रासंगिक कुञ्जी शब्दहरूको खोजी गर्नुहोस्
विस्तृत वेब एनालिटिक्स रिपोर्टहरू
तपाईले यस सबै सेवाबाट फाइदा उठाउनुहुनेछ सबै प्रतिस्पर्धालाई मूल्य दिईएको मूल्यमा।
A. सामग्री मार्केटि Strate रणनीति विकास गर्नुहोस्
सामग्री मार्केटिंग एक दर्शकलाई आकर्षित गर्न र निर्माण गर्न उपयोगी र प्रासंगिक सामग्री सिर्जना गर्न रणनीति हो। सामग्री मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयनले तपाईंलाई भविष्यका उपभोक्ताहरूको सम्भावित ट्राफिक प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ।
साथै, उपयोगी सामग्रीले तपाईंलाई उपभोक्ताहरूको ध्यान आकर्षण गर्न मद्दत गर्दछ। यसले तिनीहरूलाई तपाईंको व्यवसायप्रति वफादार बनाउँदछ। यो इनबाउन्ड मार्केटिंगको सिद्धान्त हो।
सामग्री मार्केटिंग रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका मध्ये एक तपाईंको वेबसाइटमा ब्लग थप्नु हो। WordPress ले ब्लग पृष्ठहरू छुट्टै थप्न एक सुविधा प्रदान गर्दछ।
यो ब्लगमा, तपाइँ उपयोगी र सान्दर्भिक सामग्री तपाइँको वेबसाइट मा यातायात ड्राइव गर्न लगातार प्रकाशित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं ब्लगमा विभिन्न आकर्षक प्रस्तावहरू प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा ब्लग आगन्तुकहरूले वेबसाइटमा तपाईंले बेच्ने उत्पादनहरू खरीद गर्दछ।
Google. गुगल एनालाइटिक्समा आधारित निर्णय लिनुहोस्
धेरै जसो स्टार्टअप व्यवसायका व्यक्तिले महत्वपूर्ण ब्यावसायिक निर्णयहरू गर्न केवल अन्तर्ज्ञान र अनुमान प्रयोग गर्छन्। दुर्भाग्यवश, निर्णयहरू जुन केवल अनुमान र अन्तर्ज्ञानमा आधारित हुन्छन् त्यसले तपाईंको व्यवसायलाई रोक्न सक्दछ।
जब महत्त्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णयहरू लिन्छन् स्पष्ट र सही डाटा र तथ्यहरू प्रयोग गर्न उत्तम हुन्छ। गुगल एनालिटिक्सले तपाइँको वेबसाइटमा भैरहेको विकासको बारेमा सहि डाटा प्रदान गर्न मद्दत गर्न सक्छ। दैनिक आगन्तुकहरूको संख्या, बिक्री, आय, कुन उत्पादनहरू उत्तम बिक्री भइरहेको छ, कुन पृष्ठहरूले राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्, वेब साइट छोड्ने आगन्तुकहरूको संख्यामा।
Social. सोशल मिडियाको फाइदा लिनुहोस्
सामाजिक मिडिया केवल व्यक्ति कनेक्ट को लागी सजिलो बनाउँदैन। तपाइँ तपाइँको अनलाइन बिक्री वृद्धि गर्न सामाजिक मिडिया प्लेटफार्मों को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। विश्व जनसंख्या विचार गर्दा लोकप्रिय सामाजिक मिडिया जस्तै फेसबुक र इन्स्टाग्राम को एक सक्रिय उपयोगकर्ता हो।
सामाजिक मिडिया मार्फत अनलाइन बिक्री वृद्धि गर्न, तपाईंले सही सामाजिक मिडिया मार्केटिंग रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ। तपाईंले सोशल मिडियामा अभियान चलाउनु अघि आफ्नो अनुसन्धान गर्नु पर्छ।
The. अनलाइन समुदायमा सक्रिय हुनुहोस्
अनलाइन समुदायहरू जस्तै फेसबुक, कास्कस, क्योरा, रेडडिट, र फिमेलडिली समूहहरूले तपाईंलाई तपाईंको सम्भावित ग्राहकहरू बुझ्न मद्दत गर्न सक्दछन्। तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित अनलाईन फोरमहरू फेला पार्नुहोस्। उदाहरण को लागी, यदि तपाईं यात्रा व्यवसाय चलाउनुहुन्छ भने, तपाईं फोरमहरू अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ जुन यात्रा र छुट्टिहरूसँग सम्झौता गर्दछ।
यी फोरमहरूमा, तपाईले नयाँ उपभोक्ता प्रवृत्ति, उनीहरूले सामना गर्ने मुद्दाहरू, र तपाइँको उद्योगको बारेमा जानकारी फेला पार्न सक्नुहुनेछ। तपाईं यी उत्पादनहरू वा सेवाको गुणवत्ता सुधार गर्न सक्नुहुन्छ यी अनलाइन फोरमहरूको खोजीमा आधारित।
9. ग्राहक प्रशंसापत्र देखाउनुहोस्
ग्राहक प्रशंसापत्र तपाइँको हतियार हुन सक्छ सम्भावित ग्राहकहरुलाई मनाउन। ग्राहक प्रशंसापत्र को संकलन सम्भावित ग्राहकहरु लाई प्रभाव पार्न सक्छ जो पहिले तपाइँको उत्पादन को बारे मा शंका को लागी कोशिस गर्न निश्चित थिए। तपाईं आफ्नो उत्पाद पृष्ठ, ल्यान्डि page पृष्ठ, वा तपाईंको वेबसाइटको मुख्य पृष्ठमा ग्राहक प्रशंसापत्रहरू राख्न सक्नुहुन्छ।
१०. विभिन्न भुक्तानी विधिहरू प्रदान गर्नुहोस्
तपाइँका ग्राहकहरु केवल एक विशेष बैंक को उपयोग गर्दैन। ग्राहकलाई सुविधा प्रदान गर्न उनीहरूको बिल भुक्तान गर्न विभिन्न प्रकारका भुक्तान विधिहरू प्रस्ताव गर्नुहोस्। भुक्तानी विधिहरू थप गर्नाले ब्यापारको अनलाइन बिक्री बढाउन मद्दत गर्दछ किनभने ग्राहकहरूले भुक्तानी गर्ने धेरै विकल्पहरू छन्।
११. इमानदार विज्ञापनहरू बनाउनुहोस्
विज्ञापनमा इमानदारी तपाईंको व्यापार प्रतिष्ठा को लागी महत्वपूर्ण छ। तपाईंले विज्ञापनहरू बनाउनु पर्छ जुन अद्वितीय, रचनात्मक, र रमाईलो छ। जे होस्, यसको मतलब यो होइन कि तपाइँ विज्ञापनमा बेईमान दाबीहरू घुसाउन सक्नुहुन्छ। बेइमान विज्ञापनले उपभोक्ताहरूसँग तपाईंको व्यवसायको विश्वसनीयतालाई अझ खराब बनाउँछ।
१२. मोबाइल अनुकूलन
मोबाइल फोनका लागि वेबसाइटहरूको अप्टिमाइजेसन सबै व्यवसायहरूको लागि अनिवार्य छ। यो ईन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको व्यवहारको कारण हो, जसले प्राय: मोबाइल यन्त्रहरू इन्टरनेटमा जडान गर्न प्रयोग गर्दछन्।
गुगलको अनुसन्धानका अनुसार, धेरै जसो इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल उपकरणहरू मार्फत वेबमा पहुँच गर्दछन् र यो दैनिक बृद्धि भइरहेको छ। इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको ठूलो संख्या स्मार्टफोनको मार्फत इन्टरनेटमा पहुँच गर्दछ किनकि यसले सजिलो र छिटो बनाउँछ। एक सफल वेबसाइट मालिकको रूपमा तपाईले मोबाइल उपकरणहरूमा वेबसाइट लोड गर्ने गतिलाई अनुकूलन गरेर यो नयाँ चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ।
१.. FOMO रणनीति लागू गर्नुहोस्
FOMO भनेको डरको मिसिंग आउट हो, जसको शाब्दिक अर्थ उस्तै हुन्छ। हराएको डर एक मनोवैज्ञानिक शब्द हो कि मानव ब्यवहार वर्णन गर्दछ कि चिन्तित छ यदि तिनीहरूले एक प्रवृत्ति वा रमाईला चीजहरू गुमाए भने।
व्यापार मा, तपाईं यी व्यवहार को फाइदा लिन सक्नुहुनेछ अनलाईन बिक्री बढाउनको लागि। सामान्यतया, तपाइँ तपाइँको पदोन्नतीहरु अद्वितीय र दुर्लभ छन् भनेर विश्वस्त गरेर तपाइँको संभावनाको चिन्ता बढाउनु पर्छ।
१.. वेबसाइटको गति बढाउनुहोस्
खोजी परिणाम रैंकिंग निर्धारणमा, गुगलले विभिन्न सूचकहरू प्रयोग गर्दछ। यी मध्ये एउटा मुख्य कारक भनेको तपाईंको वेबसाइट लोड हुने गति हो। यो कम्प्युटर र मोबाइल खोजी परिणामहरूमा लागू हुन्छ।
साथै, इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरू आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गर्न पर्ख्न सक्दैनन्, चाहे यो सूचना प्राप्त गरिरहेको वा उत्पादनहरू खरीद गर्ने। प्राय: इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूले वेबसाइटहरू छोड्छन् जुन seconds सेकेन्ड भन्दा लामो लोड हुन्छ।
१.. ईमेल मार्केटिंगको फाइदा लिनुहोस्
ईमेल मार्केटिंग भनेको वाणिज्यिक सन्देशहरू जस्तै ईमेलको माध्यमबाट समाचार पत्रहरू र पदोन्नतीहरू पठाउनु हो। ग्यारी थुर्क १ 197 8 Th मा ईमेल मार्केटि out पठाउने पहिलो व्यक्ति थिए। त्यसबेलादेखि ईमेल सबैभन्दा प्रभावकारी मार्केटि tools उपकरणको रूपमा परिचित भयो। २०१ 2017 मा, २० day अर्ब ईमेलहरूमध्ये प्रत्येक दिन पठाइन्छ, १२० अरब व्यवसायिक ईमेलहरू हुन्, जसमा ईमेल मार्केटि included समावेश छ।
केही व्यक्तिहरूले ईमेल मार्केटिंगलाई स्प्यामको रूपमा बुझेका हुन सक्छन् जुन उपभोक्ताहरूलाई कष्ट दिने सम्भावना छ। यद्यपि तथ्यहरूले अन्यथा भनेका छन्, ईमेल मार्केटि ofको प्रयोग हरेक बर्ष बढ्दैछ।
म्याकिन्से र कम्पनी द्वारा गरिएको एक अध्ययनले देखाए कि फेसबुक मार्केटिंग फेसबुक र ट्विटर भन्दा उपभोक्ताहरू प्राप्त गर्न times० गुणा बढी प्रभावकारी थियो। यो उच्च प्रभावकारिता कम्पनीले उनीहरूको व्यक्तिगत क्षेत्रमा उपभोक्ताहरू सम्म पुग्न सक्षम हुनुको कारण हुन सक्छ, ईमेल इनबक्स।
थप रूपमा, 59 percent प्रतिशत उपभोक्ताहरू ईमेल प्रस्तावको मार्केटिंग वा समाचारपत्रहरूमा सदस्यता लिन इच्छुक छन् यदि प्रस्ताव आयो भने। यी प्रस्तावहरू कुपन वा विशेष छुटको रूपमा हुन सक्छ। अनुसन्धानका अनुसार 65 65 प्रतिशत उपभोक्ताहरूले ईमेल मार्केटिंगबाट छुट कुपनहरू पाउँछन्। यसले देखाउँदछ कि ईमेल मार्केटिंगले उपभोक्ताहरूलाई दुबै अनलाइन र व्यक्तिगत रूपमा शपिंग गर्न प्रोत्साहित गर्दछ।
सबैले मास्टर गर्न सक्छन् कसरी अनलाइन बिक्री बढाउन। शुरुआतीहरूको लागि, माथिका सबै १ methods विधिहरू एकै पटकमा लागू गर्न गाह्रो हुन सक्छ। जे होस्, तपाइँ Semalt मा विशेषज्ञहरु को लागी तपाइँको वेबसाइट को SEO को पदोन्नति छोड्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो एसईओ ईन्जिनियरहरु पूरा प्रदर्शन गर्नेछन् गुगलको शीर्षमा प्रचार गरेर तपाईंको साइटको अप्टिमाइजेसन। थप रूपमा, ती आगन्तुकहरूको संख्या बढाउन र अनलाइन बिक्रीको ख्याल राख्छन्। यो लगानी लाभदायक छ किनकि यसले तपाईंलाई प्रभावशाली परिणाम दिन्छ।